कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै , पुन नियुक्ति हुन पर्छ भन्ने रमा वलिको माग, सहमती हुनेले सक्दो शेयर गरौ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै , पुन नियुक्ति हुन पर्छ भन्ने रमा वलिको माग, सहमती हुनेले सक्दो शेयर गरौ!
नेपाल विद्युत प्रा,धिकरणका का,र्यकारी नि,र्देशक कुलमान घिसिङले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त मात्र गरेका छैन् कि आँफुले कार्यकाल सम्मालदा ९ अर्बमा चुर्लुम्म घा,टामा डुबेको विद्युत प्रा,धिकरणलाई ९ अर्ब, ८१ करोड, २५ लाख,
रुपैयाँ नाफामा लिएर द्रुतगतिमा बिजुली जसरी काम गरि रहेका छन कुलमान घिसिङलाई नचिन्ने सा,हयत कोही छैन होला। उहाँले आज देश झल्मल्ल बनाएर जनताको मन जित्न सफल हुनु भएको छ जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ।कुलमान घिसिङको कार्यकाल आउँदो
भदौमा सकिँदै छ। अब आउँने ने,तृत्वले कुलमान जसरी काम गर्ने क,दापी सक्दैन। सरकारले दायाँ बायाँ नगरेर नहेरर कुलमान घिसिङलाई कार्यकालमा पुन नियुक्ति गर्नुपर्छ। नाताबाद कृपाबाद नियुक्ति गर्ने योजना यदि कसैले बनाएको छ भने सपना देख्न छोडि दिएँ हुन्छ।
यो मेरो आवाज मात्र नभएर आम जनताको आवाज हो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। काँधमा काँध मिलाएर कुलमान घिसिङलाई पुन कार्यकालमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनि एकसाथ आवाज उठाउ साथीहरू हामी र हाम्रो देशलाई कुलमान जस्ता हिरोहरूको खाँचो छ।
सरकार दलाल घुसखोरी भ्रष्टचारी जस्ता अराजक तत्त्वहरूलाई भूलेर पनि कदापी कुलमानको ठाउँमा नियुक्ति गर्न पाइँदैन। हाम्रो माग भनेको सिधा कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल सम्माल्न पुन नियुक्ति गरियोस्।#Iamwithyoukulmanghising❤️🇳🇵
Previous चीनले दियो नेपाललाई यस्तो बलियो साथ ,भयो भारतमा भयो खैलाबैला…हेर्नुहोस।
Next बेइमानी गर्न राजनीतिमा आएको हैन: गोकुल बाँस्कोटा